Spring နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/45)
Spring in Japan runs from March to May. We have put togetheralist of seasonal sights and locales, like rapa flowers, flowering plum trees, tulips, fresh and new green, satsuki azaleas, irises, fields of green tea, and of course cherry blossoms. This isafeel-good season, even if you’re just takingaquick stroll to see some of the colorful blooming flowers.
နန်ရှောတိုရိအိတောင်ကြားကို အမှတ်တရထားပြီး ( နာရအိဆမ်းခန် ) လို့ ခေါ်ပြီး ခိစိုဂျူးအိချိဧည့်ရိပ်သာထဲမှာ အစည်ကားဆုံး ဧည့်ရိပ်သာမြို့ဖြစ်တယ်။...
NHKတီဗွီဇာတ်လမ်း (အိုရှင်း)တွင် အဓိကနေရာအဖြစ် နာမည်ကြီးလာသော ရေပူစမ်းဒေသ။ သစ်သားတည်းခိုအိမ်လေးများရှိပြီး နေဝင်သွားပါက ဂတ်စ်မီးတိုင်လေးမျ...
တိုကျိူမှာ ၁ နာရီကြာသွားရတဲ့ နေရာမှာ ရှိတဲ့ ချိဘခရိုင်ရဲ့ မဖွံ့ ဖြိုးသေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ ဂူထဲကို အလင်းရောင် ထိုးကျနေတဲ့ မြင်ကွင်းက ဆန်းပြာ...
ဒီရေကျချိန် တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် လေးနာရီကြာ ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ ကမ်းစပ်လမ်းဖြစ်တယ်။ ရှောဇုကျွန်းရဲ့ အနောက်တောင်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ဘမ်းတန်းကျွန်းက တို...
ပန်းချီဆရာမိုနဲက ဆွဲခဲ့တဲ့ ( နှင်ပန်းကမ္ဘာနဲ့ အဲဒီက အရာများ ) စတဲ့ ပန်းချီကားနဲ့SNS ကို အဓိကထားပြီး ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တဲ့ နာမိုးနခိ...